ठूला करदाता कार्यालयको प्रारम्भिक रिपोर्ट– डिस होमले ३ वर्षमा १९ करोडभन्दा बढी आयकर छल्यो
उत्तम काप्री | २०७५ चैत २६ मंगलबार | Tuesday, April 09, 2019 १४:५१:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं- व्यवसायी चन्द्र ढकालले अगुवाइ गर्ने आइएमई ग्रुपको वर्चस्व रहेको डिस मिडिया नेटवर्क (डिस होम) ले ३ आर्थिक वर्षमा १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आयकर छली गरेको देखिन आएको छ।
डिस होमले आर्थिक वर्ष २०७१/७२, २०७२/७३ र २०७३/७४ मा गरेको कारोबार रकमबाट सरकारलाई बुझाउनुपर्ने आयकर रकममा गडबडी देखिएको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ। '३ आर्थिक वर्षमा डिस होमले गरेको आयबाट बुझाउनुपर्ने आयकरमा १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छली भएको फेला परेको छ,’ कार्यालय स्रोतले भन्यो।
डिस होमले आयकरसहित भ्याटमा पनि झन्डै ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छली गरेको कार्यालयले फेला परेको छ। ‘डिस होमले गरेको आयकर छली र भ्याट छली रकमको विषयमा कार्यालयले प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार पारिसकेको छ,’ स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो, ‘अध्ययन कमिटीले तयार पारेको रिपोर्टमा कार्यालयका प्रमुखले हस्ताक्षरसमेत गरिसकेका छन्।’
प्रारम्भिक रिपोर्टकै आधारमा अब कार्यालयले डिस होम मिडिया नेटवर्कलाई पत्र पठाउने तयारी गरेको छ। आजभोलि नै डिस होमलाई पत्र पठाएर उसको राय माग्ने तयारी थालिएको स्रोतको दाबी छ।
ग्राहक संख्या लुकाउँदै डिस होमले कर छली गरेको विषय उजागर भएसँगै ठूला करदार्ता कार्यालयले अध्ययन कमिटी बनाएर अनुसन्धान थालेको थियो। कमिटीले डिस होमको कार्यालयमा छापा मार्दै आवश्यक कागजपत्र समेत माग गरेको थियो। कार्यालयले आवश्यक कागजपत्र सहित उसले गरेको कारोबारको विवरण समेत अध्ययन गरेको थियो।
‘डिस होमले सामान्यत: असार महिनामा बिक्री गरेको रिचार्ज कार्ड ग्राहकले प्रयोग गरेपछि मात्रै आफ्नो आयमा राखेको छ,’ कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘यो सरासर गलत हो। डिस होमले जुन दिन आफ्नो कार्ड बिक्री गर्छ, त्यही दिन उसले गरेको आय रकममा जोडिनुपर्छ। यसबाट ठूलो मात्रामा आयकर छली भएको छ।’
कार्यालयले झन्डै ४ महिनाको अध्ययनपछि डिस होमले १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आयकर छली गरेको र ७ लाख रुपैयाँ बराबर भ्याटसमेत छली गरेको प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार पारेको हो।
डिस होमको विषयमा अध्ययन कमिटीले प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार पारेको कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत धनीराम शर्मा पनि स्वीकार गर्छन्। 'तर, के कति रकम वा कस्तो कमजोरी गरेको हो, त्यसको विवरण अहिले नै भन्न मिल्ने अवस्था हुन्न,' अधिकृत शर्माले भने।
डिस होमको करछली बारे यसअघिका सामग्री
कर छल्न ग्राहक संख्या लुकाउँछ डिस होम
‘मैले डिजिटल टेलिभिजन र यिनीहरुका सेवाबारे केही अध्ययन गर्न खोज्दै थिएँ तर डिस मिडिया नेटवर्कको ग्राहक संख्या कति हो भन्ने कहीँकतै फेला पार्न सकिनँ’, बजारशास्त्रका एक जना अध्येताले आश्चर्य व्यक्त गर्दै भनेका थिए, ‘यसरी आफ्नै ग्राहक संख्या लुकाउने पब्लिक कम्पनीहरु हाम्रो देशमा मात्र छन् कि क्या हो?’
कहलिएका व्यावसायी चन्द्र ढकालको घरना आइएमई ग्रुपको प्रमुख सेयर रहेको डिस मिडिया नेटवर्कको कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा पनि ती अध्येताले आफूले डिस होम टेलिभिजनको ग्राहक संख्या पत्ता लगाउन नसकेको दुखेसो गरे।
‘के साँच्चै यस्तो हुन्छ र?’ आजभन्दा झन्डै ९ वर्ष पहिला स्थापना भएर १८ असार २०७४ बाट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनेको डिस होमले आफ्नो ग्राहक संख्या किन लुकाउनुपरेको होला? हामीले सोधखोज सुरु गर्‍यौं। विस्तृतका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
डिस होमले आँखाअगाडि कर छल्दा पनि तालुकदार मन्त्रालय बेखबर
डिस होमले डिजिटल टेलिभिजन सेटअप बक्स (पे–टिभी) जडानका नाममा ९ वर्षदेखि करोडौं रुपैयाँ कर छली गर्दै आएको छ। लामो समयदेखि आफ्नै आँखाअगाडि कर तथा रोयल्टी रकम छली गर्दै आए पनि तालुकदार मन्त्रालयहरु बेखबर जस्तै बनेका छन्।
डिस मिडिया नेटवर्कका लागि नियामक निकाय भनेका सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय हुन्।
कर छली गर्दै आएको कम्पनीले आफैं मनमौजी तयार पारेको विवरणलाई दुवै मन्त्रालयहरुले अनुमोदन गर्दै कर तथा रोयल्टी संकलन गर्छन्। कर संकलन गर्ने तथा रोयल्टी उठाउने जिम्मेवारीमा रहेका यी दुवै मन्त्रालयका अधिकारीहरुले ‘कुन आधारमा कर संकलन भएको छ’ भन्ने प्रश्नको गैरजिम्मेवार जवाफ दिँदै आएका छन्। विस्तृतका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
प्रतिमहिना कम्तीमा ४ करोड कर छल्छ डिस होम, हेर्नुस् हिसाबकिताब
डिस होमले मनपरी ढंगमा ग्राहक संख्याको विवरण तयार पार्छ भन्ने तथ्य त यसअघि नै स्थापित भइसकेको छ। ग्राहक संख्या खुलस्त नपार्नु, पब्लिक कम्पनीले आफ्नो विवरण सार्वजनिक नगर्नु र नियामक निकायसँग पनि डिस होमको तथ्यांक अद्यावधिक नहुनु आफैमा कर छलीका प्रमाण हुन्।
अब प्रश्न उठ्छ, डिस होमले प्रतिमहिना कति कर छल्छ?
रिपोर्टिङका क्रममा डिस होमले कति कर बुझाएको रहेछ भन्ने विवरण हात पार्न सजिलो थिएन। किनभने, राजनीति र प्रशासनलाई प्रभावमा पार्ने व्यवसायी चन्द्र ढकालको व्यापारिक घरानासँग जोडिएको विषय थियो यो। विस्तृतका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
कर छल्ने डिस होम राजस्व अनुसन्धान र ठूला करदातासँगै अब आन्तरिक राजस्व विभागको निगरानीमा
डिस होमले मनपरी ढंगमा ग्राहक संख्या बताउँदै कर तिर्दै आएको विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले समेत अनुसन्धान थालेको छ।
डिस होमले ग्राहक संख्या लुकाएर मासिक ४ करोडौं रुपैयाँ कर छली गर्दै आएको समाचार बाहिरिएपछि विभागले पनि अनुसन्धान थालेको हो। डिस होमको कर छलीको विषय नेपाल लाइभले प्रकाशन गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले टोलीसमेत गठन गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। विस्तृतका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
डिस होमले बतायो ग्राहक संख्या, उसकै हिसाबमा कति हुन्छ कर छली?
डिस होमले अन्ततः आफ्नो ग्राहक संख्या १५ लाख रहेको स्वीकार गरेको छ। केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै डिस होमले १५ लाख सेटअप बक्स जडान भएको स्वीकार गरेको हो।
ग्राहक संख्या लुकाउँदै कर छली गरेको विषय नेपाल लाइभले उजागर गरेसँगै डिस मिडिया नेटवर्कले आफूले तिरेको विभिन्न शीर्षकको करसमेत सार्वजनिक गरेको छ। डिस होमले ९ वर्षको अवधिमा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर तिरको दाबी गरे पनि ग्राहक संख्या र तिरेको करको विवरण भने मेल खाँदैन। विस्तृतका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।